गण्डकी प्रदेशको कुन जिल्लामा कतिजना होम क्वारेण्टाइनमा छन् ? | Samacharpati गण्डकी प्रदेशको कुन जिल्लामा कतिजना होम क्वारेण्टाइनमा छन् ? – Samacharpati
पोखरा, २४ चैत । गण्डकी प्रदेशमा २४ सय ९२ होम क्वारेण्टाइनमा बसेका छन् । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशका ९ जिल्लामा विभिन्न देशबाट फर्किका मानिसहरु होम क्वारेण्टाइनमा बसेको जनाएको हो ।
तर गण्डकी प्रदेशका मुस्ताङ, नवलपुर र लमजुङमा होम क्वारेण्टाइनमा कोहिपनि नबसेको निर्देशनालयका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक नबराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै बागलुङमा ८ सय ६ जना होम क्वारेण्टाइनमा बसेका छन् । यस्तै सबैभन्दा कम मनाङमा ३ जना होम क्वारेण्टाइनमा बसेको उल्लेख छ ।
यस्तै कास्कीमा ९६ जना होम क्वारेण्टाइनमा बसेका छन् भने स्याङजामा ५ सय १३ जना होम क्वारेण्टाइनमा रहेको जनाइएको छ । तनहुँमा ५ सय ५०, गोरखामा २ सय ४८, पर्वतमा १ सय ८५, म्याग्दीमा ९१ जना होम क्वारेण्टाइनमा बसेको जनाइएको छ ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशमा २ सय २८ ठाउँमा ४ हजार ७२ बेड क्वारेण्टाइन बनाइएको छ । जसमा अहिले २ सय ४७ क्वारेण्टाइनमा बसीरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश भित्र २ सय ९३ आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८ जनाको अहिले आइसोलेसनमा उपचार भईरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ७५ जनाको कोरोनाको स्बाब परिक्षण गरिएको छ जसमा ७३ जनाको नेगेटिभ आएको छ भने २ जनाको पोजेटिभ आएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा आज थपिए ८३ जना काेराेनाका बिरामी